Morarano – Toamasina: ahina hivadika resa-bola ilay “Raharaha karandohan’olona” | NewsMada
Tokony hiakatra eo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana ny asabotsy lasa teo, ao Toamasina, ilay “Raharaha momba ny fahitan’ny tovovavy iray karandohan’olona” tao amin’ny trano nitadiavany asa. Tsy tanteraka indray anefa izany. Manahy ny mpanara-baovao satria hoe misy mitady hamadika ho resa-bola ny raharaha, hanafenana ny marina.
Raharaha mbola tsy afaka an-tsain’ny maro ary tena andrasan’ny rehetra izay mety ho vokatry ny fanadihadiana momba ilay “Raharaha fahitana tovovavy iray karandohan’olona” tao amin’ny tokantrano nitadiavany asa ao Morarano Toamasina. Ny alarobia 14 aogositra 2019 lasa teo no nanaovana fanadihadiana an-dRavaonirina Elisabeth, naharitra adim-pamantaranora telo be izao tao amin’ny borigadin’ny zandarimaria misahana ny fikarohana sy ny ady heloka bevava. Miahiahy, hatreto, ny rehetra, indrindra ireo mponina ao Toamasina, fa misy mikononkonona hamadika ny raharaha amin’ny alalan’ny fampiasam-bola hanafenana ny marina sy ny rariny momba izao raharaha izao. Fantatra, araka ny loharanom-baovao marim-pototra, fa mpamatsy vola kandidà depiote farany teo ireto fianakaviana tompon-trano nisehoan’ity “Raharaha fahitana karandohan’olona sy taovan’olona ity” ka mampanahy be ihany, araka ny fahitan’ny mpanara-baovao azy, raha ny tatitra nampitain’ny loharam-baovao.
Atao izay hidiran’ilay tovovavy am-ponja…
Raha ny loharanom-baovao voaangona momba ity raharaha ity, saika hoentina eo anivon’ny fampanoavana, ny asabotsy teo, ny raharaha, saingy tsy mbola tanteraka izany hatreto fa miandry ny rehetra. Milaza hatrany ireo loharanom-baovao fa manomboka misy tsindry ny raharaha ka atao ny fomba rehetra hidiran’ilay tovovavy am-ponja. Etsy ankilan’izay, manomboka tonga ao Toamasina avokoa ireo fianakavian’ilay tovovavy avy any Marolambo hanaraka akaiky ity raharaha ity izay araka ny fantatra dia fianakavian’ny kardinaly.